‘ ဒါက ဖီဖာဂိမ်း မဟုတ်ဘူး ‘ ဆန်ချို နဲ့ ယူနိုက်တက် ကြယ်ပွင့် နှစ်ဦးကို သတိပေးလိုက်တဲ့ ပေါလ် အင့်စ် - SPORTS MYANMAR
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကစားသမားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ပေါလ် အင့်စ်က လက်ရှိအသင်းကို အကူအညီ ဖြစ်စေနိုင်မယ့် ကစားဟန်ထက် အလိမ်အခေါက် စွမ်းရည်တွေ ပြသဖို့ အားသန် နေခဲ့ကြတဲ့ ဂျေဒန် ဆန်ချို ၊ အန်သိုနီ မာရှယ် နဲ့ ဂျက်စီ လင်ဂတ် တို့ကို သတိပေး သွားခဲ့လိုက် ပါတယ်
ဆန်ချိုဟာ ဒီနွေမှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဆီ ပေါင် 73 သန်းနဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ အခုထိ ပုံစံကောင််း ပြသနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သေးပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် မာရှယ်ဟာလည်း တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေကို ပြသနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ရပါတယ် ။
ဂျက်စီ လင်ဂတ်ကတော့ သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုး သွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပုံစံကောင်း ပြသနေခဲ့ပေမဲ့ လိုအပ်ချက် အချို့တော့ ရှိနေသေးဆဲ ပါပဲ ။ သုံးဦးလုံးမှာ တူညီနေတဲ့ အချက်တစ်ခုက လိုအပ်တဲ့ တစ်ချက်ထိ ကစားဟန်တွေကို ပြသခြင်း မရှိပဲ အလိမ်အခေါက် စွမ်းရည်တွေ ပြသဖို့ ကြိုးစားနေကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုတော့ ပေါလ် အင့်စ်က ဆန်ချိုဟာ သင်ယူနေဆဲ ဖြစ််တယ်ဆိုတာကို နားလည်ပေးလို့ ရနိုင်ကြောင်း ၊ ဒါပေမဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဖီဖာဂိမ်း မဟုတ်ကြောင်း ၊ ထိရောက်တဲ့ ကစားဟန် ကစားဖို့ ၊ မလိုအပ်ပဲ လိမ်ခေါက်မှုတွေ မလုပ်ဖို့ သတိပေးစကား ပြောကြား သွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” ဆန်ချိုက လေ့လာနေဆဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက ဖီဖာဂိမ်း မဟုတ်ပါဘူး ။ ပြိုင်ဖက် ကစားသမား နှစ်ဦး ၊ သုံးဦး ၊ လေးဦး အထိ လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ်ပြနေလို့ ၊ စကေးတွေ ပြသဖို့ ကြိုးစားနေလို့ မရနိုင်ပါဘူး “
” ဟုတ်ပါတယ် ၊ သူတို့ လုပ်ပြနိုင်တဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ ဒါဟာ ကြည့်လို့ လှပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဆန်ချို နဲ့ လင်ဂတ်တို့ လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ်ပုံတွေက… ဘောလုံးကို သာမန်ပဲ ကစားကြစမ်းပါကွာ ” လို့ ပေါလ် အင့်စ် က ပြောလိုက်ပြီး ရိုင်ယန်ဂစ် အကြောင်း ဆက်လက် ဥပမာပေးခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် အဲ့လို ကစားပုံက ကျွန်တော့်ကို စိတ်လေစေပါတယ် ။ ဂစ်လို ကစားသမားမျိုးကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် သူက… ဘောလုံးရ ၊ ပေးလိုက် ၊ one two ဆော့လိုက် ၊ ရလိုက် တန်းပေးလိုက် ၊ လိုအပ်တဲ့ အခါမှာ အနည်းငယ် လိမ်ခေါက်ပြလိုက် လုပ်တာချည်းပါပဲ “
” ဒါပေမဲ့ မာရှယ် ၊ ဆန်ချို နဲ့ လင်ဂတ် တို့ ဆီမှာတော့ ကျွန်တော် ဒါတွေကို အမြဲတမ်းလို မြင်နေခဲ့ရ ပါတယ် ။ သူတို့ ဒါကို လေ့လာ သင်ယူရပါ့မယ် ။ လိမ်ခေါက် နေတာချည်းက အဖြေ မဟုတ်ပါဘူး ။ တခါတလေမှာတော့ ဘောလုံး ပေးလိုက် ဂိုးဧရိယာထဲ ပြေးဝင်လိုက် လုပ်သင့်ပါတယ် “
” အခု မာရှယ်ရဲ့ အရှေ့မှာ (ပွဲထွက်ခွင့်အတွက်) လူတွေ ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလဲ ? သူ့ကို စျေးကွက် တင်လိုက်ရတော့မှာလား ? အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား ကတော့ ‘နိုး’ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ မာရှယ်ဟာ သူ့ရဲ့စီမံကိန်းထဲ ပါဝင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် “
” ကျွန်တော်ကတော့ မာရှယ်ရဲ့ body language ကို ကြည့်ပြီး ‘ သူ ကွင်းထဲမှာရော ရှိချင်ရဲ့လား ‘ လို့ တွေးတောမိ ပါတယ် ။ အချို့ ကစားသမားတွေကတော့ ‘ ငါ ဘာလို့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ မပါရပဲ ကာရာဘောင် ပွဲစဥ်မှာ ပါနေရတာလဲ ‘ ဆိုပြီး ဆင်ခြင်း သုံးသပ်တာ ၊ တွေးတောတာမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ် “
” ခင်ဗျားတို့ မာရှယ်ရဲ့ body language ကို ကြည့်လိုက်ကြပါ ။ သူဟာ ဒီနေရာမှာ ရှိမနေချင်တာ ထင်ရှားနေခဲ့ရ ပါတယ် ” လို့ ပေါလ် အင့်စ် က ကာရာဘောင် ကစားခဲ့တဲ့ မာရှယ်ရဲ့ အပြုအမူတွေ အပေါ် သုံးသပ် မှတ်ချက်ပေး သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။